वैज्ञानिकहरूले ‘भूत’ बनाए!! - Science Dialog
ताज उपडेट / रोचक
वैज्ञानिकहरूले ‘भूत’ बनाए!!
by Kapil Acharya · April 1, 2015
कहिलेकाहिँ एक्लै बस्दा तपाईँलाई ‘भूत’को उपस्थिति भएको महसुस हुन्छ? अनि बाटोमा एक्लै हिँड्दा तपाईँकै छेउबाट चिसो हावाले तपाईँलाई बोलाइरहेको जस्तो लाग्छ? अनि राति लोडसेडिङ्गको बेला अँध्यारो कोठामा तपाईँलाई कसैले हेरिरहेको जस्तो लाग्छ?
यदि त्यस्तो ‘भूत’को उपस्थितिले तपाईँलाई सताइरहेको छ भने चिन्ता नलिनुहोस्, त्यो सबै एउटा भ्रम मात्र हो। त्यो सबै तपाईँको आफ्नै दिमागले तपाईँलाई उल्लु बनाइरहेको हो। तपाईँको दिमाग यति बाठो छ नि, कहिलेकाहिँ चाहिने-नचाहिने कुराहरूको कारण तपाईँलाई सताइरहन्छ। आफ्नो वास्तविक काम गर्न छोडेर ओभरटाइम गरेर बस्दिन्छ।
यो सबै तथ्यको रहस्य स्वीस अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाएका छन्। उनिहरूले आफ्नै प्रयोगशालामा भूतको सिर्जना गरेका छन्।
अधिक मानिसहरूले किन र कसरी भूतको उपस्थितिलाई वास्तविक मानेर आफ्नो जीवन नै तनावग्रस्त बनाउँछन् भनेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनिहरूले यो तरिका अपनाएका हुन्।
भूतको उपस्थितिजस्तो अनुभव प्रयोगशालामा ल्याउनको लागि केहि स्वयंसेवकहरूको आँखामा पट्टि बाँधेर एक रोबटको मार्फत उनिहरूको दिमागमा सङ्केत पठाएका थिए, जसको कारण स्वयंसेवकहरूले साँच्चै नै त्यहाँ भूतको उपस्थिति महसुस गरेका थिए र कतिले त त्यो प्रक्रिया बन्द गर्न अनुरोध पनि गरेका थिए।
“जब दिमाग र शरीरको संचार-समयमा घटबढ हुन्छ तब मानिसको दिमागले आफ्नै एक काल्पनिक दुनिया सिर्जना गर्दछ र वास्तविक दुनियामा नभएको कुरालाई नै वास्तविक ठानेर भूतको सिर्जना आफै गर्दछ।”- प्रोफेसर ओलफ ब्ल्याङ्कले भने।
यो परीक्षणले गर्दा के कुराको पुष्टि हुन्छ भन्दा मानवजातीको सुरुवात देखि नै भूतको डर अनि त्रासमा रुमलिरहेको अवस्था वास्तविक नभई केवल उनिहरूकै दिमागको भ्रम रहेछ।
उक्त परीक्षणमा दुई वटा रोबटको प्रयोग भएको थियो। स्वयंसेवकको आँखामा पट्टि बाँधेपछि एउटा रोबटले उसको औँलामा समातेको हुन्थ्यो भने अर्को रोबटले उसको पछाडि ढाडमा हल्का मात्र छोएको हुन्थ्यो।
त्यो रोबटको मूख्य काम के थियो भन्दा एउटाबाट आएको सिग्नललाई अर्को रोबटमा पठाउँथ्यो। यसरी अगाडिको रोबटमा कसैले छुन्थ्यो भने त्यो अनुभुतिलाई पछाडिको रोबटको माध्यमबाट आफ्नै ढाडमा पठाउँथ्यो र आफ्नै हातले आफ्नै ढाडमा छोएको जस्तो महसुस गराउँथ्यो। तर जब दिमागले पठाएको सिग्नललाई ५०० मिलिसेकेण्डले ढिलो गरिन्थ्यो तब ती स्वयंसेवकहरूले त्यहाँ भूतको उपस्थिति महसुस गर्दथे। आफ्नो वरिपरि कुनै छाँयाले घेरेको र कोहि अदृश्य हातले आफ्नो पछाडि छोएको जस्तो महसुर गर्दथे। यो परीक्षण गर्दा कतिपय स्वयंसेवक त आत्तिएर सबै फुकालेर भागेका पनि थिए।
Next story बेलायतमा सफल परीक्षण: मानव रहित विमानमार्फत इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै फेसबुक
Previous story बिश्व किर्तिमान बनाउँदै चीन आइपुग्यो सोलार विमान, अहिलेसम्मकै लामो उडान गर्ने